Nezvedu | Piedra (Xiamen) Chivezwa Co., Ltd.
Piedra (Xiamen) Chivezwa Co., Ltd.
PIEDRA (XIAMEN) RUDO rwe CO, iri nyanzvi mukugadzira mifananidzo yakavezwa uye zvifananidzo, senge zvifananidzo zvesimbi, zvifananidzo zvebronze, zvifananidzo zororo, zvifukidzo zvemafirigirosi, nezvimwewo .. Idzo zvindarira zvendarira uye simbi mhizha zvinogona kushandiswa sekunze kwebindu, zvidhori zvakakura zvekunze, Shongedzo yemadziro esimbi, zvishongo zverudzi, nezvimwewo ..
Tine nyanzvi kwazvo timu: Vane tarenda 3D vanogadzira / maartist, vashandi vehunyanzvi, kutengesa kwakanaka, nyanzvi QC vaongorori, yakasimba yekutengesa-timu, inobatsira yakawanda kumabasa edu epamusoro mhando. Yedu yekuveza mifananidzo inobatsira yedu USA mutengi kuwana mutengo wechipiri mune inozivikanwa art show muU.SA, iyo USA mutengi ikozvino ndiyo yedu yekureba mushandirapamwe mutengi, yakaiswa akati wandei maawa kwatiri pagore.
Nemakore anodarika gumi neshanu ezviitiko mukugadzira nekuburitsa zvifananidzo zvesimbi uye zvivezwa zvebronze, tinogona kukupa yakanyanya mhando mhando, rakakura girazi gloss mhedzisiro pazvinhu zvakavezwa zvesimbi, basa rakanakisa remifananidzo. Zvatinonyanya kuita zvivezwa ndezvevanyanzvi, vagadziri, art gallery, vatengesi, mabasa ekuvaka ......
Nekuda kwekumanikidza kwemhando yepamusoro uye mukurumbira wakanaka mhiri kwemakungwa nekune dzimba, mifananidzo yedu yakatengeswa kune dzakawanda nyika, USA, Europe, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Israel, Indonesia, nezvimwe, uye ikozvino tine vamiririri kuMalawi, Singapore nePhilippine, isu tiri kutarisira zvakanyanya uye makambani mazhinji kana vanhu kuti tibatane nesu kuti tigadzire remangwana rakanaka pamwe!
Pfungwa dze "Yepamusoro soro, chikwereti chakanakisa uye kugutsikana kwevatengi" mweya uri pakati pedu. Unoshuvira kuve nemukana wekukushandira iwe !!
Bhizinesi Type: Mugadziri
Distributor / Mutengesi
Musika Mukuru: North America
Kwete. YeVashandi: 100 ~ 150
Year Yakasimbiswa: 2006
Tasangana nevatengi vazhinji onexhibition uye art gallery. Isu tiri vanobatana nevatengi vedu kubva kutanga kutaurirana kune mushure mekutengesa-service. Sevashandi vezvivezwa zvekutengesa, tinokurukura zvinodiwa nevatengi vedu uye nekuvapa zvivezwa zvesimbi zvakakurisa kwavari. Pamwe chete negore nehukama hwegore, isu takamisa hukama hwenguva refu uye takawana mukurumbira wakanaka kubva kwavari.
Iyo Factory Mifananidzo
PIEDRA (XIAMEN) RUDO rwe CO, anopfuura makore gumi mune yakagadzirwa bhizinesi mutsara, vane ruzivo rwakakura mukugadzira uye vanogadzira zvidhori zvakagadzirirwa uye zvifananidzo. Zvigadzirwa zvedu zvinosvika zvinosanganisira simbi isina simbi, simbi, ndarira uye zvivezwa zvegirazi yegirazi. Zvese zvidhori hazvisi kungoiswa sekushongedzwa kwekunze, senge zororo rezororo, kushongedzwa kwebindu, kushongedzwa kwemakungwa, villas, kushongedzwa kweguta; asiwo zvemukati zvekushongedza, zvakadai sekushongedzwa kwehotera, kushongedzwa kwekirabhu, kushongedzwa kwekushambadzira, zvishongedzo zvehofisi, zvishongo zvemumba, chiratidziro cheimba uye zvichingodaro. Unotenda zvakavezwa zvemazuva ano uye zvekugadzira, zvinonakidzwa nemeso ako uye zvinoburitsa mamood ako.
Mune rimwe shoko, isu tine timu yehunyanzvi uye yekushandira pamwe kuti usangane nezvinodiwa. Chikwata chedu chiri kusanganisira mutungamiri anoona zviri kure, vatengesi vane hunyanzvi, vagadziri veunyanzvi, vane ruzivo rwakakura vashandi, munhu wekutonga zvemhando yepamusoro. Tine ruzivo rwakanyanya kwazvo rwekugadzira zvigadzirwa zvemifananidzo uye mifananidzo yakavezwa yakaiswa. PIEDRA (XIAMEN) RUDO rwe CO, nekuti chokwadi chinogona kupa akawanda ebasa sekukumbira kwemutengi.
Basa Redu Rakanaka:
01. Ipa dzimwe hama dzemifananidzo mifananidzo yevatengi inotanga kutaurwa.
02. Ipa dhizaini dhizaini kana mutengi achida.
03. Gadzira zvivezwa zvemhando yepamusoro zvemutengi.
04. Dhizaini yevatengi inogamuchirwa neushamwari.
05. Ronga Kutumira kwevatengi.
06. Ipa saiti yekuisa saiti kumutengi, uye ipa vashandi kuti vaise panzvimbo saiti yakakura chirongwa.
07. Govera zvakapfuura zvekutengesa uye mushure mekutengesa masevhisi.
08. Ipa dzimwe nzira dzakachengetedzwa kumutengi.
09. Inogona kukwikwidza mamwe mapurojekiti akaoma.
Gara uri pano kuti upe zvakanakisa pamberi pebasa uye mushure mekutengesa-iwe basa.
PIEDRA (XIAMEN) RUDO rwe CO, ine nguva yakareba yekugadzira nekutengesa zvigadzirwa.Our timu ine vatungamiriri vanofungidzira, vagadziri vane tarenda, vanokwanisa kutengesa vatengesi, vane hunyanzvi, QC inodzora munhu, uye vane ruzivo vashandi. Unogona kuve nekuvimbiswa kuti unogona kushandira pamwe nesu. Noushamwari tinokugashira iwe kuti uve nekubvunza kwatiri chero nguva, uye tichagara tiri pano mhinduro.
PIEDRA (XIAMEN) RUDO rwe CO,
CHIMI 1407, CHANGAN BLDG, NO.75-77 LVLING ROAD, HULI DISTRICT, XIAMEN, 361009, FUJIAN, CHINA
Runhare: 0086-13950080662, 0086-592-8264336